Warbixin + Muuqaal Video: Dhaqdhaqaaqe deggan Belgium oo ku baaqay Fatwo ka dhan dadka aan Muslimka ahayn. | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha
Xag-jire magangelyo ka helay Belgium ayaa isku bedelay inuu Shabakaddaha Bulshadda ka iclaamiyo Fatwo ka dhan ah Soomaalida Kirishtaanka, oo uu kaga digay inay dib u dhisan Kaniisadda (A Catholic Church) oo ku taalla caasimadda Somalia ee Muqdisho.
Muuqaalkiisa Video ee xanaaqa qeylada leh, waxa uu Xag-jire Maxamuud Maxamed Carab ku tilmaamay Kirishtaanka inay aad uga xun yihiin xubnaha Kooxda Argagixisadda ee Alshabaab ee Kumanaanka qof ku dilay guud ahaan Geeska Afrika.
Aragtidiisa waxa uu u qaatay in Farriintiisa Online-ka inuu jawaab badan ka heli doono dalkiisa hooyo ee Somalia oo uu waqtiga adag ka jiro, iyadoo Kooxda Alshabaab wadaan dagaalka iska caabinta ee ay uga soo horjeedaan Dowladda ay Caalamka aqoonsan yihiin iyo dadka taageerayaasha u ah Dimuqraadiyadda iyo Nabadda.
Maxamuud Maxamed Carab iyo Labo saaxiibadiisa oo haatan ku sugan dalka Belgium si ay ugu noolaadaan, kadib, markii ay Europe ku yimaadeen Dukumenti Magangelyo-doon ah oo Talyaaniga laga bixiyey.
Waxaana si aan sharci ahayn loogu gudbiyey dalka Netherlands, iyagoo gacan ka helayo Dahir Alasow oo ay kula kulmeen magaalladda Rome.
Mid kale oo ay saaxiibo yihiin oo lagu magacaabo Omar Faruk Osman oo u eg qof ku lug leh Is-xambaarka ayaa waxay iyaga u gudbiyey dalka Belgium, wuxuuna u maareeyey sidii ay Warqad Taageero uga heli lahaayeen Hay’ad Warbaahineed oo Caalami ah.
Dal-ku-galkooda (Their Visas) waxaa laga bixiyey Safaaradda Talyaaniga ee magaalladda Kampala, waxayna markii ay tageen Belgium sheegteen inay Europe si toos ah uga yimaadeen Somalia.
Arrintaasi beenta ah waxaa hubaal inay khatar gelin karaan Fursad fursad ee Magangelyo-doonayaasha ku heli karaan Tiradda ay maalgeliyaan dalalka Europe.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA FATWADA M.CARAB
Daawo Wariye Carab oo la hadlay kuwa masiixiyiinta fidiya
Maxamuud Carab waxa uu Farriintiisa Video-ga uga digay Nin Somali oo lagu magacaabo Hassan Abdulkadir Mudeey oo ku nool falka Sweden oo uu ku tuhunsan yahay inuu kaalin ka qaadanayo Dhismaha dhowr Kanisiad oo ku yaalla magaalladda Muqdisho.
Waxa uu sii waday Fariintiisa iyo inuu Ninkaasi ku cabsi-geliyo ciqaabo aan la carabaabin, haddii uu sii wado taageerida Dhismayaasha Kaniisadaha ee ku yaalla gudaha dalka Somalia.
Hassan Abdulkadir Mudeey waxa uu Maxamuud Carab siiyey digniin muddo 48 saacadood inuu faraha kala baxo Mashruucaasi.
Muquaalka Video-ga waxa kale oo uu Maxamuud Carab ku sheegay inuu Hassan Abdulkadir Mudeey mas’uul ka yahay inuu gacansaar la leeyahay dad uu sheegay inay faafinayaan Kirishtaanka.
Farriintiisa waxa uu ku sii daray inaan arrintaasi la oggolaan Karin.
“Waxaad kufsatay haween, lacagna waad xaday, taasi uma xumo sida ay u xun tahay barista Kirishtaanka” ayuu ku yiri Maxamuud Carab muuqaalka Video-ga ee lagu soo daabacay Bogga page Alasow.
Hadalka Carab waxa uu samaynayaa Mas’uuliyadda Laymam badan ee Dheelitirkiisa liita oo ay Taageerayaashiisa ku sugan Somalia iyo qeybaha kale u qaadan karaan Run.
“Waxa uu khatar gelinayaa nolol badan, mar haddii uu isagu horey u haystay nabad” sidaas waxaa yiri Jamal Hassan oo la hadlay Shabakadda Wararka ee Somaliupdate News.
“Laga yaabee inaan Carab loo sheegin inuu dalka Beljim yahay dal Kirishtaan ah” ayuu sii raaciyey Jamaal.
Jihadistayaasha waxay horey u qaateen Warbaahinta Bulshadda si ay ugu qortaan xubno cusub, kuna faafiyaan Dacaayadooda, ma aha oo keliya meelaha ay Dhaqan ahaan ku xooggan yihiin, balse xitaa dalalka iyada marti-geliya.
Maxamuud Carab waxa kale oo uu sheegay “Waxaan door bidnay inaan geeriyoono, halkii aan ka faafin lahayn Kirishtaanka”.
Maxamuud Carab waxa kaloo uu Muuqaalkiisa Videi-ga kaga hadlay shaqs kale oo ku nool Muqdisho, oo lagu magacaabo Mr. Garaad Salaad Xersi.
Mr. Garaad waxa uu yahay La-taliyaha Sare ee xagga Isgaarsiinta ee Ra’isul-wasaraaha Somalia, Omar Sharmarke, waxaana uu Carab uga digay inuu ciqaab dhibaato leh kala kulmi doono haddii uu sii wado Barashadda Kirishtaanka iyo inuu noloshiisa khatar ku gelinayo, kana sii shaqaysan doonin magaalladda Muqdisho.
Waxa kaloo uu ku eedeeyey Garaad “Waxaad carruurta yar bartaa Kirishtaanka”.
Maxamuud Carab waxa uu Farriintiisa qeylada ah ku eedeeyey Urur Maxali ah oo la dagaalamayo Xag-jirnimadda ka jirta gudaha Somalia, oo uu ku sheegay inay yihiin Mashruuc Kirishtaan oo la doonayo in dad badan lagu Kirihtaameeyo.
Baarayaasha waxay kaloo tuseen Kharaj dhan ilaa 9,000 oo Euro oo uu bixiyey Dahir Alasow, Mukhalaska Is-xambaarka, si uu hubaal uga dhigo iyaga inay jid nabad ah ku tagaan dalka Belgium oo Sharci ahaan ka duwan dalka magangelyadda siisay Alasow.
Waxaa lagu tuhunsan yahay Alasow inuu Xafiis Is-xambaarka Tahriibka ku leeyahay caasimadda dalka Uganda ee Kampala, halkaasi oo dadka loo soo dhoofiyo Libya, kadibna dalalka Europe.
Waxa uu dhowr jeer u safray Kampala labadii sanno ee la soo dhaafay hawlo ganacsi oo qarsoodi ah.
Dhawaan Muwaadin haysta Dhalashadda Belgium oo Argagixiso ah ayaa isku qarxiyey dalalka Faransiiska iyo Ciraaq.
Waxa uu dhawaan sii daayey Muuqaal Video oo uu ku sheegay inuu isagu ku faraxsan yahay gacmaha (ISIS), sida uu muujinayo Video-gan: Halkan ka daawo: as shown in the video.
Magangelyo-doonayaal badan ayaa dib ugu soo laabtay dalalkii marti-geliyey, oo ay bilaabeen inay Fariimo Karaahiyo ah ka soo saaraan guryahooda cusub.
Previous: (SAWIRRO): Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay
Next: Magaalladda Muqdisho oo Kaalinta labaad kaga jirta Kororka Dadka ee magaallooyinka Calaamka.